Забур 44 CARS - Nnwom 44 ASCB
1Ao Onyankopɔn, yɛde yɛn aso ate;
yɛn agyanom aka akyerɛ yɛn;
deɛ woyɛeɛ wɔ wɔn berɛ so,
wɔ tete mmerɛ no mu.
2Wode wo nsa pamoo amanaman no
na wobɔɔ yɛn agyanom atenaseɛ;
wodwerɛɛ nnipa no
na womaa yɛn agyanom dii yie.
3Ɛnyɛ wɔn akofena na wɔde nyaa asase no,
na ɛnyɛ wɔn nsa na ɛmaa wɔn nkonimdie;
ɛyɛ wo nsa nifa, wo basa,
ne wʼanim hann, ɛfiri sɛ na wodɔ wɔn.
4Woyɛ me Ɔhene ne me Onyankopɔn,
deɛ ɔhyɛ nkonimdie ma Yakob.
5Ɛnam wo so na yɛpamoo yɛn Atamfoɔ;
wo din mu na yɛtiatia wɔn a wɔkyiri yɛn soɔ.
6Meremfa me ho nto mʼagyan so
mʼakofena remfa nkonimdie mmrɛ me;
7na wo na woma yɛdi yɛn atamfoɔ so.
Wogu wɔn a wɔtane yɛn anim ase.
8Onyankopɔn mu na yɛhoahoa yɛn ho da mu nyinaa
na yɛbɛkamfo wo din no daa daa.
9Nanso seesei woapo yɛn abrɛ yɛn ase;
wone yɛn asraafoɔ nnkɔ ɔsa bio.
10Woma yɛdwane firii ɛdɔm anim
ma yɛn atamfoɔ fom yɛn agyapadeɛ.
11Woyii yɛn maa sɛ wɔnkum yɛn sɛ nnwan
na woahwete yɛn wɔ amanaman no mu.
12Wotɔn wo nkurɔfoɔ fofoofo,
na woannya mfasoɔ biara amfiri mu.
13Woayɛ yɛn ahohoradeɛ ama yɛn afipamfoɔ,
animtiabudeɛ ne aseredeɛ ama wɔn a atwa yɛn ho ahyia.
14Woayɛ yɛn akasabɛbuo wɔ aman no mu
na nnipa no woso wɔn ti de gu yɛn so.
15Mʼanimguaseɛ di mʼanim daa,
na aniwuo akata mʼanim
16ɛsiane wɔn a wɔbɔ me ahohora na wɔkasa tia me de yi me ahi,
ɛsiane ɔtamfoɔ a nʼani abre sɛ ɔbɛtɔ were no enti.
17Yeinom nyinaa too yɛn deɛ,
nanso yɛn werɛ mfirii wo,
na yɛmmuu wʼapam no nso so.
18Yɛn akoma ntwe mfirii wo ho;
na yɛn nan nso mmane mfirii wo kwan so.
19Nanso wodwerɛɛ yɛn yɛɛ yɛn sakraman tuo
na wode esum kabii kataa yɛn so.
20Sɛ na yɛn werɛ afiri yɛn Onyankopɔn din
anaa sɛ yɛatrɛ yɛn nsam akyerɛ ananafoɔ nyame a
21anka Onyankopɔn bɛhunu,
ɛfiri sɛ ɔnim akoma mu ahintasɛm.
22Nanso, wo enti, wɔkum yɛn daa nyinaa;
wɔbu yɛn sɛ nnwan a wɔrekɔkum wɔn.
23Nyane, Ao Awurade! Adɛn enti na wada?
Keka wo ho! Nnya yɛn hɔ afebɔɔ.
24Adɛn enti na wode wʼanim ahinta
na wo werɛ firi yɛn ahohia ne nhyɛsoɔ?
25Wɔabrɛ yɛn ase kɔ dɔteɛ mu
na yɛn onipadua aka afam dɔteɛ.
26Sɔre bɛboa yɛn;
wʼadɔeɛ a ɛnsa da no enti, gye yɛn.
ASCB : Nnwom 44